Zoma 31A- (Md. Lioka 16,1-8) - 06/11/2020 | FKMP
Zoma 31A- (Md. Lioka 16,1-8) – 06/11/2020
« Ary hoy koa Jesoa tamin’ny mpianany: Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray nanana mpitandrim-pananana izay nampangain’ny olona taminy fa nandany ny fananany.
Dia nantsoiny izy ka nilazany hoe: Ahoana izany fandrenesako izany anao? Avoahy kely hoe ny fitandremanao, fa amin’ny sisa dia tsy hahazo miadidy ny fananako intsony hianao.
Tamin’izay ilay mpitandrina dia nanao anakampo hoe: Inona re no hataoko, fa esorin’ny tompoko amin’ny fitandremana ny fananany aho ity? Ny miasa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mahamenatra ahy.
Aoka fa fantatro izay hataoko, mba handraisan’ny olona ahy any an-tranony rahefa esorina amin’ny raharahako aho.
Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin’ny tompony, ka hoy izy tamin’ny voalohany: Ananan’ny tompoko hoatrinona hianao?
Diloilo injaton’ny barika, hoy io. Dia hoy ny mpitandrina taminy: Raiso ny taratasinao, ary mipetraha ka soraty haingana dimam-polo.
Dia hoy indray izy tamin’ny anankiray: Hoatrinona kosa ny trosa aminao? Vary injaton’ny famarana, hoy izy. Dia hoy ilay mpitandrina: Raiso ny taratasinao ka soraty valopolo.
Noderain’ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho hafetsena, fa hendrihendry kokoa ny zanak’izao tontolo izao amin’izy samy izy noho ny zanaky ny fahazavana. »
Nanaitra ny sain’ny mpamaky tokoa ity andinin-tsoratra Masina vakiantsika ity.
Mpitandrina tsy marina kanefa derain’ny Tompony satria lalin-tsaina, izany no nakan’i Jesoa fanoharana, hanaitra ny fo sy saintsika Kristiana na koa hoe: zanaky ny mazava.
Tsy sanatria hampirisika antsika zanaky ny mazava hanao zavatra tsy marina akory ny Tompo fa kosa fanoharana mba ho entiny hanaitra antsika mba hahay hitsinjo ny hoavintsika ihany koa mihoatra noho ireo zanak’izao tontolo izao ireo.
Eto amin’ity tantara ity ny zanak’izao tontolo izao dia mampiasa ny sainy mba hitsinjovany ny hoaviny, mijery ny ampitsony izy hoe ho aiza izy raha hiala amin’ny asany ka nahatonga azy naka namana mba handraisan’ny olona azy any an-tranony rahefa esorina amin’ny raharahany izy ary nitady hevitra izy, mba hakany ny fon’ireo namany hampiantrano azy rahatrizay…
Mazava ho azy, fa ny zavatra eto amin’ity izao tontolo izao ity ihany no himasoany sy tena zava-dehibe aminy. Noho izany nieritreritra ny hitsinjovana izay ho aviny eto amin’ity tany ity izy.
Ry havana, toa manan-tsaina tokoa izao tontolo izao, manan-tsaina satria mitsinjo ny ho aviny, ary manao izay azony atao sy izay saim-pantany.
Ary mba manao ahoana kosa ny kristiana antsoina hoe zanaky ny mazava?
Mba mitsinjo ny ho avintsika, ny ampitso izay tsy fantatra, ka handraisan’ny Tompo antsika ho ao Aminy ao an-danitra ve isika?
Matetika dia mampametra-panontaniana tokoa fa ambakain’izao tontolo izao isika.
Isika izay mahafantatra ny fisian’ny andro farany, ny fanjakan’ny lanitra , ny fiainana mandrakizay, indray no manamoramora sy manadino izany.
Maro tokoa mantsy no tsy mba mampiasa saina fatratra toa ireo zanak’izao tontolo izao ireo, ny ho amin’izay hiafarantsika, ka manao hoe : » inona no mba tena hampivelatra sy hampandroso ny fiainam-panahiko ? Inona ilay tena tokony hatao ka handaniako ny androko hahatonga ahy ho tena azo antoka fa ho vita fihavanana amin’Andriamanitra tanteraka tokoa rahatrizay ka miala ety?
Tsy sasatra miantso antsika ny Tompo mba handroso lalina kokoa isika; mba ho zanaky ny mazava ho liana amin’ny fahafantarana ny finoana sy ilay famonjena nataon’i Kristy, ary tena hanapa-kevitra sy hifidy ilay anjara tsara eo an-tongotry ny Tompo.
Andeha àry hiaraka handinin-tena isika, mba hitsinjo ny ho avintsika mandrakizay ka tsy ho variana ny amin’izao fiainana izao, fa ho mpanompo mendrika sy mahatoky ary tsy ambakain’izao tontolo izao intsony isika.
Ry Jesoa kristy Tomponay ô !,
Misaotra Anao izahay nohon’ny Teny fanoharana nomenao anay anio, mba ho entinao hampandroso sy hahatonga anay hitsinjo ny ho avinay dia ilay fiainana mandrakizay efa nomaninao ho anay sahady.
Omeo fahendrena ary izahay, mba tsy ho fahazarana fotsiny na ho fombafomba fotsiny ihany no andehananay mivavaka ka izay tianay sy mahafinaritra anay ihany no ataonay, fa ampio izahay mba hanao ny sitraponao.Tantano sy vimbino ry Jesoa ô mba ho zanaka manoa sy manana firaisam-po tanteraka aminao, tsy hanakalo Anao amin’ny fiainan’izao tontolo izao, fa hitsinjo ny ho avinay, dia tena ho zanaky ny mazava mandeha araka ny Teninao.
Izany dia voninahitry ny Anaranao Masina mandrakizay.
Misaotra ry Jesoa Tompo tia anay. Amen
Previous Post: Alakamisy 31A- (Lioka 15,1-10) – 05/11/2020
Next Post: Asabotsy 31A- (Md. Lioka 16,9-15) – 07/11/2020